I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Aniruddh
'I-Nivaant' kwakuyiphrojekthi yesilwane esifuywayo sikamakhi wezakhiwo wase-Mumbai uManjunath Shenoy. Wabona ngeso lengqondo ikhaya langempelasonto lapho ayengase ahlehlele khona futhi azibambele mathupha endaweni enokuthula. Futhi iyiphi indawo engcono yokuthola lokho, kune-Western Ghats, eseduze kakhulu ne-Kalsubai Peak. Isitayela sakhe sezakhiwo sesiphile ngempela ngokuhlobisa okubukekayo kanye nokusetshenziswa okuphelele kwendawo yokuhlala ukuze uzizwe ungaphandle ngenkathi uphuza inkomishi efudumele ye-cocoa ngaphakathi.
Igumbi lokulala 1 kanye no-3 linendawo yokuhlala ethokomele lapho izivakashi zingabeka khona omatilasi ababili ukuze zilale. Bheka izindlu zangasese ezimibalabala, ishawa evulekile, ithala elithandekayo notshani oluhle!
Indlu iyingxenye yomphakathi ongenamasango onokuvikeleka amahora angama-24. Eminye imisebenzi ye-club house ihlanganisa, i-swimming pool evamile (uhambo lwamaminithi angu-10), imidlalo yasendlini (i-carrom ne-table tennis) kanye namabhayisikili*.
*Izinkokhelo zayo yonke imisebenzi zizoba ngokwamazinga e-clubhouse futhi zincike ekutholakaleni.
Enye ye-USPs ye-Nivaant ukufinyeleleka kwayo ohambweni olufushane olulula, idamu elibukekayo kanye nezindawo ezizungezile ezilungele ukugijima ekuseni!
Idamu leBhavli - 3 kms
Idamu leTalegaon - 6 kms
Isango laseMyanmar (Vipassana Academy) - 7 kms
Ukuphakama kweKalsubai - 32 kms
Izivini zaseVallonne - 38 kms
I-Bhandardara - 44 kms
Izivini zaseSula - 50 kms
Ihlala itholakala ocingweni / nge-SMS ukuze ikusize uhlele ukuhlala kwakho e-Nivaant.